यस संसारको शासक को हो? | बाइबल प्रश्नहरूको जवाफ
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उङ्गाबेरे उम्बुन्डु उर्दू एफिक एस्टोनियन ओसेसियन कन्नडा काजाक किकाओन्डे किकुयु किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरून्डी किर्गिज किलुबा किसोंगे कोंगो कोरियन क्याटालान क्रिओ क्रोएसियन क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गुजराती ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जान्डे जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या डच डाँग्मे डेनिश तामिल ताहिटी तेलगु त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली पंजाबी पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बुल्गेरियन भियतनामिज मराठी मल्यालम माया मालागासी माल्टिज मिजो मूर म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रूसी रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन
यस संसारको वास्तविक शासक को हो?
संसारको शासक ईश्वर हुनुभएको भए यति धेरै दुःखकष्ट हुन्थ्यो र?
यस संसारको शासक ईश्वर हो भनेर थुप्रै मानिस विश्वास गर्छन्‌। यदि यो कुरा साँचो हो भने पृथ्वीमा किन यति धेरै दुःखकष्ट छ? (व्यवस्था ३२:४, ५) बाइबलले बताएअनुसार यो संसार एउटा दुष्ट व्यक्तिको हातमा छ।—१ यूहन्ना ५:१९ पढ्नुहोस्।
यो संसार कसरी त्यस्तो दुष्टको हातमा पऱ्यो? मानव इतिहासको सुरुमा एउटा स्वर्गदूतले सृष्टिकर्ताको विरोध गऱ्यो र प्रथम मानव दम्पतीलाई पनि त्यसै गर्न उक्सायो। (उत्पत्ति ३:१-६) त्यस दम्पतीले विद्रोही स्वर्गदूत सैतानको कुरा मान्यो। यसरी तिनीहरूले त्यसलाई आफ्नो शासक बनायो। सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वरसित मात्र शासन गर्ने अधिकार छ। तर त्यसो भन्दैमा आफ्नो अधीनमा राख्न उहाँ कसैलाई जबरजस्ती गर्नुहुन्न। बरु प्रेमले उत्प्रेरित भएर उहाँको अधीनमा बसेको चाहनुहुन्छ। (व्यवस्था ६:६; ३०:१६, १९) दुःखको कुरा, आज धेरैजसो मानिसले प्रथम मानव दम्पतीले जस्तै सैतानको बहकाउमा परेर गलत निर्णय गरेका छन्‌।—प्रकाश १२:९ पढ्नुहोस्।
कसले मानिसको समस्याको समाधान गर्नेछ?
के ईश्वरले सैतानको दुष्ट शासन रहिरहन दिनुहुनेछ? दिनुहुनेछैन! सैतानले गरेको सबै खराब कुरालाई सच्याउन ईश्वरले आफ्नो छोरा येशूलाई चलाउनुहुनेछ।—१ यूहन्ना ३:८ पढ्नुहोस्।
ईश्वरको शक्ति पाएर येशूले सैतानलाई नाश गर्नुहुनेछ। (रोमी १६:२०) त्यसपछि ईश्वरले मानिसजातिमाथि शासन गर्नुहुनेछ अनि आफ्नो उद्देश्यअनुरूप नै मानिसजातिलाई सुरुको जस्तै शान्तिमय अवस्थामा फर्काउनुहुनेछ।—प्रकाश २१:३-५ पढ्नुहोस्।